Hitan'ny Samsung fa mitombo 30% | ny varotra any Espana Androidsis
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia efa nisy ny vinavina miaraka amin'ny a Nihena ny varotra Huawei tany Espana. Zavatra izay mariky ny sinoa ihany vao tsy ela akory izay, noho ny fanakanana ny Google sy ny fisalasalana ateraky ny mpanjifa. Ity fotoana ratsy ataon'ny mpanamboatra sinoa ity dia araraotin'ny marika hafa. Samsung no orinasa mahazo tombony betsaka amin'ity toe-javatra ity.
Efa fantatra izany nitombo ny fikarohana finday Samsung ireo herinandro ireo. Ankehitriny, koa ny varotra dia nitombo teo amin'ny tsena Espaniôla, miaraka amin'ny fitomboana miavaka, izay tsy isalasalana fa manamafy ny toerana manjakazaka amin'ny marika koreana eo amin'ny tsena.
Nanomboka ny alatsinainy 20 may lasa teo Ny varotra Samsung any Espana dia nitombo teo anelanelan'ny 25 sy 35%. Fisondrotana mifanohitra amin'ny fianjeran'i Huawei, izay raha ny tombatombana dia very 30%, na dia misy aza ny fampitam-baovao mandeha ary milaza fa mbola avo kokoa noho izany ny tarehimarika amin'izao fotoana izao.
Ho fanampin'izay, misy ihany koa ireo marika hafa izay mahazo tombony amin'ny fotoana ratsy an'i Xiaomi. Araka ny loharanom-baovao, marika toa LG, Sony na Apple koa dia mahatsikaritra ny varotra tsara kokoa. Mahagaga fa marika roa toa ny LG sy Sony, izay nivarotra maimaimpoana nandritra ny fotoana elaela, dia lasibatr'ireo mpanjifa izao.
fa Samsung no iray manararaotra betsaka ny toe-javatra. Zavatra tsy tokony hahagaga, satria ny marika Koreana dia efa nanatontosa ny sasany hetsika fampiroboroboana mahery setra, mikatsaka ny hahazoany tombony indrindra amin'ny fotoana ratsy izay vao nifaninana tamin'ny tsenan'ny telefaona.
Azo antoka fa hahaliana izany jereo ny fiafaran'ny varotra amin'ny telovolana faharoa. Tamin'ny voalohany dia nijoro ho mpivarotra lafo indrindra i Samsung, na dia i Huawei aza no nanana fitomboana betsaka indrindra ary nanakaiky kokoa ny orinasa koreana. Zavatra toa tsy misy intsony noho ireo herinandro ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Mirongatra ny varotra Samsung any Espana
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny safidy tsiambaratelo vaovao